İzmir'de Tren Kazası!.. Yük Treninin Vagonları Raydan Çıkarak Devrildi | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirIzmir တွင်ရထားမတော်တဆမှု! .. Freight Train Wagons ပြေးဆွဲသည်
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ကုန်တင်ရထား၏ izmir ရထားမတော်တဆမှုလှည်းလွဲ
mirzmir ရထားမတော်တဆမှု! ..7wagon ကုန်တင်ရထား Alsancak ဆိပ်ကမ်းမှမသေချာသည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်Şehitlerလမ်းမှလမ်းလွဲသွားသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများနှင့်အဖြစ်အပျက်များပြတ်တောက်ခြင်းများမရှိပါ။
Izmir ရှိ Konak ခရိုင်ရှိ7ရထားကျသည်။ Izmir ဆိပ်ကမ်းမှ Denizli ခရိုင်Sarayköyခရိုင်သို့ပို့သည့်ညနေခင်းအချိန်များ၊ စကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်များဖြင့်သယ်ဆောင်သည့်ကုန်တင်ရထားသည်Halkapınarခရိုင် overehitler လမ်းပေါ်တွင်မရှင်းလင်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဖြုတ်ချခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိသော်လည်းလေယာဉ်ပျံသန်းမှုကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အင်ဂျင်နီယာက၏ status အပေါ်အစီရင်ခံစာမတော်တဆမှုငြိမ်ဝပ်စွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်, တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ဖြစ်ရပ်အပေါ်မူတည်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ TCDD အရာရှိများနှင့်ရဲအဖွဲ့များသည်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရိန်းအော်ပရေတာကိုမှောက်ထားသောလှည်းများကိုရထားများမှရုပ်သိမ်းရန်ခေါ်ခဲ့သည်။
Diyarbakır Surda yük treninin geçişi sırasında…
Ankara'da YHT Kazası Sonrası İzmir Mavi Treninin…
Ray ၏ပက်ဖြန်း output Wagon ရထား! xnumxişçသေဆုံးခဲ့